Setha kabusha igobolondo - kwenzani na? Abadali of the imishini yokunyathelisa inzuzo zako ezisemqoka ezisetshenzisiwe nje kusukela ukudayiswa okudlekayo. Refilling inki cartridges impela nomthelela ekunciphiseni abakhiqizi engenayo.
Lokho isimo zaphambukela isiqondiso sabo, abakhiqizi ziye zasungula chip - chip okuyinto ogibele igobolondo. Ngamanye amazwi, imemori flash ngezisetshenziswa eqoshiwe igobolondo. It idlulisela Imininingwane engenayo esuka iphrinta, equkethe eziningi Amakhasi kakade ukunyathelisa.
Lapho lo igobolondo efakwe kwi iphrinta, i-chip njengoba ibhalisiwe futhi iqala ngokubala. Uma u-90% predetermined libhalwe, iphrinta inika isignali ukuthi toner kuzophela maduzane.
Empeleni, lo igobolondo namanje ukupenda. Iphrinta kuphela ukuphikelela kuzodinga esikhundleni. Ukuze uxazulule le nkinga ngezindlela eziningana.
Udaba nge laser amaphrinta ixazululwe ngempela kalula. Udinga nje esikhundleni igobolondo ukuthi olukhohlisayo okuyingxenye. Ngemodeli ngayinye iphrinta has chips ayo, kodwa kukhona jikelele, okuyizinto iyahambisana ezihlukahlukene amaphrinta.
Uyinki cartridges aqukethe chip, futhi. Kodwa yenziwe ukuze ayikwazi ukushintshwa. Ukuze uxazulule le nkinga, futhi iklanyelwe kabusha cartridges.
Indlela kabusha igobolondo EPSON
Uyinki cartridges kusukela kule nomkhiqizi Ziyazisetha ne chips izinhlelo. Le divayisi Kulula ukuthenga nganoma iyiphi esitolo ezikhethekile. Ungasebenzisa futhi izinhlelo isevisi. Okuvame kakhulu wabo - wuhlelo jikelele ukuthi phinda ezingeni inki. Sebenzisa mahhala. Kodwa kungcono ukusebenzisa Ochwepheshe kuphela abanolwazi kulo mkhakha.
Indlela kabusha HP igobolondo CB335HE
Okokuqala, kumelwe isuswe. Bese uya "Isevisi imenyu" iphrinta. Ukuze wenze lokhu, kwi iyunithi, cindezela "Khansela" inkinobho futhi uyibambe. Ngo parallel, qhafaza inkinobho ethi "KULUNGILE", bese ukudedela zonke izinkinobho.
khetha "Setha kabusha kwemenyu" bese uchofoza futhi "KULUNGILE" kwimenyu efanayo. Thola lento «kwengxenye Setha kabusha», futhi - "KULUNGILE". Umqondisi womshini kumele manje ucishiwe.
Nalapha futhi, uvula iphrinta ku. Udinga ukukhetha esifundeni sakho kanye nolimi, bese ulandela yonke imiyalelo iphrinta. Uma, ngemuva yonke amazinga izinyathelo inki ngeke ibonise 100%, bese kabusha hp igobolondo akusebenzanga. Phinda lonke futhi. Vele esikhundleni inketho «Setha kabusha kwengxenye» ukuze «Semi Okugcwele Setha kabusha».
Indlela kabusha HP igobolondo 9XX
Ukuze wenze lokhu, kudingeka isula ulwazi igobolondo:
- Take it libuyele oxhumana ngokwabo.
- I kwindlela engakwesokunxele uphawu ngokucophelela nge Yesigcilikisha tape kuqala oxhumana ezine.
- ukubeka into kwisayithi, uvale lid. Umqondisi womshini azophrinta ikhasi Samandla.
- ususe igobolondo inki, ngokudubula tape. Pads of ingcina ukukuthinta utshwala.
- Manje ngetheyiphu itheyiphu izikhonkwane phezulu amane lane ongemaswapheleni kwesokudla.
- ibuyisela igobolondo endaweni. Umqondisi womshini kunyatheliswa ikhasi Samandla.
- Nalapha futhi, ususa i igobolondo inki, ususe tape, Sula utshwala.
- Kuyadingeka bawubeka emuva ku iphrinta kanye ukuphrinta-run angu-41 ikhodi.
Okuprintiwe (in the "Ubuningi Ukuhlala ') kufanele kube igama elithi" amaphesenti angu-100 ". Uma kunjalo, khona-ke Manje usuyazi ukuthi kabusha iphrinta yakho igobolondo.
Inyama yenkomo kuhhavini nemifino: zokupheka ezithakazelisayo, ikakhulukazi ukupheka kanye nokubuyekeza